(यो बि.सं. २०७४ मा नयाँ संविधानको कार्यान्वयनको कठीन खुडकिलो मानिएको तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर समृद्द नेपालको सपना साकार पार्ने लक्ष्यमा अगाडि बढेको जिकिर गरिएको हाम्रो सुन्दर हिमाली राज्य नेपालको चुनावमा म स्वंय प्रतक्ष्य सहभागी भएर अनुभूत गरेका अनुभवहरूको श्रृङ्खला हो । जसलाई मैले नेताको छोरा नाम दिएको छु । यस श्रृङ्खलामा म चुनावका अँध्यारा र उज्याला पक्षहरूलाई अधिकतम इमान्दारीताका साथ प्रस्तुत गर्नेछु ।)
चुनाव प्रचारका क्रममा Photo: Nirajan Thapa
बेनी त्यसै त कोप्चो ठाउँ झन मंसिर लागिसकेको समय, जाडोले लास्टै ल्याङ हानिरहेथ्यो । अनि चुनावको चटारोले देशलाई छपक्कै छोपेको समय, म चाँहि दुईथान सिरकले छोपिएर बिस्तारामा लडिरहेथेँ, त्यो बिहानको आरम्भ एउटा फोनबाट भयो । मलाई यस्ता फोनले मंसिर लागेपछि अति नै ल्याङ गरिरहेथे । बेनीबाट चारपाँच घण्टाको पैदल यात्रामा पुगिने गाउँबाट एकजना अति नै नजिकका चिनजानको भाईको फोन थियो त्यो, उनको उर्दि थियो, "दाई, एकजना बैनी आज बिनी (बेनी) झर्दैछिन, तिनैका हाता १५, १६ हजार पठाईदिनु होला हैं !"
यी तिनै भाई थिए, जो म चुनावका लागि नेपाल जाने तयारीमा रहेका बेला मलाई बारम्बार फेसबुक म्यासेन्जरमा चारा हालिरहेका हुन्थे “ढुक्क हुनुस् दाई, बुढाले जित्छन! तर अलि मेहनत चाँहि गर्न पर्छ हैं ।” उनले भनेको मेहनत सानोतिनो कुरो थिएन । त्यो मेहनत अर्थोउपार्जन गर्ने मेहनत नभै अर्थवितरणसम्बन्धि मेहनत थियो । जुन मैले फोन आउँदाको दिनको साँझमा गरेको थिएँ ।
साँझको समय, मेरा तीनजना हितैषी चुनावकै लागि आफ्नै खर्चमा काठमान्डुबाट बेनीमा झरेका थिए । एकजना साथी भोली भेट्ने वाचासहित हतार हतार गाउँतिर उक्लिए पनि म अरू दुईजना साथीहरूसँग खाजा खादैँ थिएँ । त्यही समयमा ती भाईले पठाएकी बैनी हामीले खाजा खादैँ गरेको चमेनाघरमा आईपुगिन । गलामा मजेत्रो बेरेकी उनलाई राम्रोसँग चिनिनँ मैले, नमस्कारको औपचारिकतासँगै उनले भनिन् "दाई मलाई फलाना दाईले भेट्न भन्नुभएको ।" मैले खाजा मगाउँदै थिएँ, भनीन् - "हैन, भयो दाई । मैले भर्खर खाएकी, गाडी छुट्ने बेला भैसक्यो । बिहान आएको गाडी फर्किन लागेको छ, मैले ड्राइभरलाई एकैछिन रोक्न भनेर आ'की हुम ।" यसो खाजा खुवाउँदै त्यही मेसोमा भोट पनि माग्नुपर्ला सोचेको थिएँ । तर उनले हतार गरिन, उनलाई ड्राइभरले ५ मिनेटको समय दिदैं फोन गर्यो । मैले हतार हतार खल्तीबाट एउटा बिटो झिकेर उनलाई दिएँ । रेष्टुराँको सिढीं झर्दै गर्दा उनले भनीन् - "दाई, त्यो दाईलाई अब पैसा नदिनुस् है, तिनीहरूले त उनार्को बाट पनि लिएका छन जस्तो लाग्छ मलाई ।"
उनको कुराले एकछिन मेरो वरिपरीको वातावरण नै सन्नँ बनाईदियो । उनी तहाँबाट फटाफट निक्लिन् तर म एकदम "ब्ल्याङ्क आउट" को थितीमा रहेँ । भित्रबाट साथीहरूले बोलाए, "ओए, तिम्रो खाजा सेलाउन लागिसक्यो ।"
काठमान्डुबाट आफ्नै खर्चमा चुनावमा भोट खसाल्नैका लागि बेनी झरेका उनीहरू प्रति मेरो गहिरो सम्मान थियो । अतः मैले औपचारिकता निभाउनलाई भएपनि खर्चका बारेमा सोधेँ । निस्किने बेलामा खाजाको बिलसमेत उनीहरूले नै तिरे । चुनावको समयमा यस्ता मान्छेहरू सम्मान मात्र हैन पूजाका योग्य हुन्छन भन्ने मलाई चुनावले नै सिकाउँदै थियो । उनीहरूले पनि त्यहि साँझ घरजाने गाडि पाए, म उनीहरूलाई पुर्याउन म्याग्दी पुलको बसबिसौनीसम्म पुगेँ ।
खासमा उनीहरू जस्तै विभिन्न शिलशिलामा जिल्लाबाहिर रहेका साथीभाईलाई चुनावमा मत खसाल्नका लागि जसरी पनि आउन आग्रह गर्नुपर्छ भन्नेमा म सचेत थिइँन । मलाई यो खुंखार आइडिया दिएकी थिइँन मेरा यिनै साथीकी सहपाठी जोसँग एकपटक काठमान्डुमा मेरो जम्काभेट भएको थियो । कुराकानी कै क्रममा मेरा बाको र उनको पार्टी एउटै भएको रहस्योद्घाटन भो। त्यसपछि हामी फेसबुकमा पनि जोडिएका थियौं । सर्वहारा पार्टीकी सचेत कार्यकर्ता उनले मलाई म्यासेन्जरमा लेखेकी थिइँन - "फलाना फलानालाई पोखरासम्म प्लेनको टिकट ब्यवस्था गर्दिनुस्, भोट हाल्न आउँछन ।" उसले भनेका फलानाहरू ती दुईजना यिनै थिए, जो मेरो विशेष अनुरोधमा स्वंयको खर्चमा काठमाडौंबाट माइक्रो चढेर बेनी आएर त्यो साँझ मिनिबस चढेर घरतिरको यात्रा गर्दै थिए । उसको महंगो फर्मान सुनेर मेरा कन्सिरीका रौं ठाडा परेका थिए, तर म त्यो एकमहिना बुद्द बन्नुपरेकाले उसलाई फेसबुकमा ब्लक गर्न सकिनँ । हुन पनि मान्छेलाई निषेध गर्नु र उसको कुविचारको समूल नष्ट गर्नु फरक कुरा रहिछ । त्यसपछि, उसँग मेरो कुरा खासै भएन । तर उसका फेसबुक पोस्टहरूमा चुनावहरू महंगा हुँदै गएकोबारे गहिरो असन्तुष्टि पोखिएको हुन्थ्यो । तर मलाई यत्ति थाहा छ, ती युवती एकदिन नेपालको राजनीतिमा छाउनेछिन । जुन अर्को बिडम्बनापूर्ण अवस्था हुनेछ !
भाग-५ सम्म आउँदा यो एकै व्यक्तिमा हुने अनेकन मनोभाव पढ्न र अनुभव गर्न पाईन्छ । यस संगै समाजमा कसैले नकोट्याएको यथार्थलाई आँटका साथ निराजन जीले लेख्दै गर्दा एउटा सत्य बुझ्ने मौका मिल्यो; तिम्रो नेता कति ईमान्दार छ भनेर थाहा पाउनु छ भने उसको छोरोको कर्म र विचारको अध्ययन गर ।
पात्रको माध्यमबाट प्रवित्तिमाथी खतरनाक प्रहार !!!